चेल्सीको पोस्टमा म्यानचेस्टर सिटीको ६ गोल, अग्युरोको कीर्तिमानी ह्याट्रिक
नेपाल लाइभ सोमबार, माघ २८, २०७५, ०८:१२:००
म्यानचेस्टर– इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर सिटीले चेल्सीमाथि सानदार जित हात पारेको छ। सिटीले आइतबार राति भएको खेलमा चेल्सीलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो।
सिटीको जितमा सर्जियो अग्युरोले ह्याट्रिक गर्दा रहिम स्टर्लिङले २ गोल गरे। खेलको चौथो मिनेटमा स्टर्लिङले गोल गरेर सिटीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। १३ र १९ मिनेटमा अग्युरोले २ गोल गरेपछि खेलमा सिटीले बलियो पकड जमायो। २५ मिनेटमा गुन्डगनले अर्को गोल गर्दा सिटीले पहिलो हाफमै ४–० को अग्रता लिएको थियो।
५६ मिनेटमा अग्युरोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। सिटी यतिमै रोकिएन। ८० मिनेटमा स्टर्लिङले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा सिटी ६–० ले अघि बढेको थियो।
खेलमा ह्याट्रिक गरेका अग्युरोले प्रिमियर लिगमा बढी ह्याट्रिक गर्ने रेकर्डसँग बराबरी गरेका छन्। अग्युरोले आइतबार गरेको ह्याट्रिक प्रिमियर लिगमा एघारौं ह्याट्रिक ह । यसअघि एलन सिएररले पनि ११ ह्याट्रिक गरेक थिए।
लिगको अर्को खेलमा टोटनह्यामले लेस्टर सिटीमाथि ३–१ को जित हात पारेको छ। टोटनह्यामका लागि डि सान्चेजले ३३, इरिक्सनले ६३ र सन हेउङ मिनले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको पहिलो मिनेटमा गोल गरे।
जितसँगै सिटी अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। सिटीले २७ खेलबाट ६५ अंक छ। ६५ अंक नै जोडेको लिभरपुल गोलअन्तरमा पछि पर्दा दोस्रो स्थानमा झरेको छ। यद्यपी लिभरपुलले एक खेल कम खेलेको छ। तेस्रो स्थानको टोटनह्यामको २६ खेलबाट ६० अंक भएको छ।
इटहरीमा नेपाली सेनाको ५० शैयाको अस्पताल प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले उद्घाटन गरेको अस्पताल सेनाका सेवारत तथा अवकाशप्राप्त सैनिक तथा उनीहरूका परिवारको लागि अस्पताल खोलिए... १५ मिनेट पहिले
सम्हालिन सक्ला नेपाली टिम? कमजोर टिमहरुसँग हारेको इतिहासलाई साक्षी राख्दै फेरि एउटा सपना बुनेर नेपाली टिम थाइल्यान्ड पुगेको छ। टी-२० एसिया कपको पहिलो खुड्किलोक... १४ मिनेट पहिले
‘जारी’ को फस्ट लुकमा दयाहाङ् र मिरुना दयाहांग राई र मिरुना मगरको मुख्य अभिनय रहेको फिल्म ‘जारी’ को फस्ट लुक पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । आगामी जेष्ठ २३ मा प्रदर्शन मिति ताेक... १९ मिनेट पहिले
सम्हालिन सक्ला नेपाली टिम? १४ मिनेट पहिले
इटहरीमा नेपाली सेनाको ५० शैयाको अस्पताल १५ मिनेट पहिले
‘जारी’ को फस्ट लुकमा दयाहाङ् र मिरुना १९ मिनेट पहिले
पौडेल पक्षको अगुवा कार्यकर्ता भेला शनिबार वीरगन्जमा ५१ मिनेट पहिले